Myanmar Gays Heaven: Thar Thar ပါ Facebook Chat Box ကနေပို့ထားတာပါ
Posted by Myanmar Gays Heaven at 9:40 AM
like , i am boy69model@gmail.com
Wai Yan July 3, 2014 at 10:10 AM
kyaw min July 27, 2014 at 4:40 AM
I am boy who interests both sex if somebody want sex with me contact this email is kyawminhtike1994@gmail.com
Anonymous August 1, 2014 at 12:04 AM
Lovely Junction August 4, 2014 at 10:01 PM
ရန်ကုန်မှာနေပါတယ် Bottom ပါ
Minthuaung Minthuaung November 19, 2015 at 12:22 PM
လိုးချင်​တယ်​ရန်​ကုန်​ကပါ အသက်​က ၂၇
Yome. Laymha August 16, 2014 at 1:27 PM
ph no ကထားခဲ့လို့မရဘူး အားလုံးသိကုန်ရင် မကောင်းဘူးလေ မသိစေချင်လို့ပါ gmail အကောင့်သာထားခဲ့ အပ်လိုက်မယ် ပြီးရင် ဖုန်းနံပါတ်ပေးမယ် အိုကေ
လားရှိုးကပါဆိုရင် gmail အကောင့်ထားခဲ့ပါ ဆက်သွယ်လိုက်ပါမယ်...
ဖုန်းထားခဲ့ပါ ချက်​ချင်းဆက်​ပြီး လာလိုး​ပေးမယ်​
moe zatt September 10, 2014 at 12:12 PM
Anonymous September 14, 2014 at 10:03 PM
နေပြာည်တော်က topကါviberသုံးတယ်အခြောက်မလိုပါလီးကြီးတယ် ခံမိုင်မှဆက်သွယ်ပါ
solo Zhang March 11, 2015 at 11:22 AM
Anonymous September 19, 2014 at 12:56 AM
အပေါ်ကချက်ချင်းဆက်ပြီး လာလိုးပေးမယ်ဆိုတဲ့တစ်ယောက် gmail acc ထားခဲ့လေ ဆက်သွယ်လိုက်မယ် ပြီးမှဖုန်းနံပါတ်ပေးမယ်..........အိုကေ
微信号 wechat ID ~ woshiwo19287
mdy ka fri tway nae fri phit chin lo plz add me
leo man September 21, 2014 at 2:41 PM
thein garra May 5, 2015 at 2:07 PM
call me 09796980511
Viber သုံးလား09797158645 viberက​နေဆက်​သွယ်​ပါ needtosexဆိုပီး အမှန်းလိုး​ပေးမည်​
Anonymous October 8, 2014 at 11:43 PM
kk October 6, 2014 at 8:24 PM
Anonymous October 10, 2014 at 11:18 PM
Anonymous October 12, 2014 at 7:06 AM
I need ver at ygn 09402556578
athu02621 October 20, 2015 at 10:21 PM
မင်းကိုငါကဘာလိမ်သွားတာလဲလိုးပေးမယ်ပြောပြီးမင်းပုံကိုမကြိုက်လို့မလိုးပေးလိုက်တာကိုလိမ်တယ်ပြောတာလားချူစားတယ်ပြောရအောင်မင်းစီးကဘာတွေချူစားသွားလို့လဲမင်းစီကငေဝတကျပ်လောက်များငါချူစားသွားဖူးလို့လားဒဲ့ပြောပါ မင်းလဲဖင်လိုးခံတဲ့အခြောက်ဆိုပေမဲ့ယောက်ျားပဲစကားကိုတန်ဖိုးရှိအောင်တော့ပြောပါ 09425301542 Top npt
Prince Shine October 16, 2014 at 2:07 AM
Anonymous January 29, 2015 at 6:38 AM
Yuki Moto November 1, 2014 at 3:56 AM
​ဝေလင်း November 11, 2014 at 8:14 PM
muscle boy တစ်ယောက်လိုးတာကိုအီစိမ့်နေအောင်ခံချင်ပါတယ်။အသက်အရွယ်မရွေးပါ။ရန်ကုန်ကပါ။Viber ကနေဆက်သွယ်ပါ။ 0931050230
်ပါ Ver ပါ
koko March 20, 2015 at 8:33 PM
thawngno November 27, 2014 at 11:38 AM
thawngno November 27, 2014 at 11:43 AM
အသက်​ ၄၀ အထက်​ခံချင်​တဲ့သူဆက်​သွယ်​လို့ရတယ်​ မ​လေးရှာမှာရှိရင်​​ပေါ့ နွဲ့ရင်​​တော့မကြိုက်​ဘူး နည်းနည်းဝလည်းရတယ်​ ရှိရင်​ဆက်​သွယ်​ပါ​...မလူးဖူး​သေးလို့လူးချင်​​နေတာ sms.viber.whatsapp 0183889230
ငယ်တဲ့ သူဆိုရင် ရော လိုးမှာလား... မနွဲ့ဘူးနော် တို့က
top boyyy December 2, 2014 at 7:20 PM
ကျနော့် နာမည် ရဲရင့် ပါ မန်းလေး ကပါ သူငယ်ချင်းတွေ ဖြစ်ချင်ပါတယ်ဗျာ 09 444008163 ကျနော့ဖုန်းပါဗျ
ပဲခူးတိုင်းကပါ ၂၅ နှစ်ပါ မပွင့်မပုန်းပါ ခင်ချင်ပါတယ် 09 250711139
အဲပုံထဲက သားသားက အပုန်းမပါအေ... နောက်မှ ညည်းတို့ ပုလင်းကွဲ ရှမှ မျက်ရည်နဲ့ မျက်ခွက်နဲ့ မလာနဲ့... ဒါဘဲ ကြိုပြောထားမယ်...
မနွဲ့ပါခံချင် သည် ၇လက်မ ကျော်ရမည်facebookလိပ်စာထားခဲ့ပါရေတာရှည်ကဆိုပိုကောင်းမည်
Wechat id PHX2889614121
i like sex who want to sex me
Anonymous December 23, 2014 at 12:02 AM
Anonymous December 23, 2014 at 12:03 AM
kyawkyaw oo December 26, 2014 at 6:02 PM
Iron Dragon January 3, 2015 at 12:03 PM
ygn 0936073294 botလီးကြီး နဲ့ခံချင်
Anonymous January 29, 2015 at 6:31 AM
kaung lay February 24, 2015 at 10:31 AM
မန်းလေးက ကျားစစ်စစ်ကို လိုးချင်တယ်
nyiko March 21, 2015 at 10:34 AM
သန်လျင်မှာနေတယ် လိုးပေးမယ် ၁၈ ကနေ ၃၀ ကြား
Anonymous March 27, 2015 at 2:30 AM
Pyawbwe ကမရှိဘူးလားခံချင်​လို့ပါtunmin362 အပ်​​ပေးပါ.
Anonymous March 31, 2015 at 12:45 AM
zawzaw htite November 28, 2015 at 1:04 AM
Anonymous April 21, 2015 at 10:24 PM
0973018558 contact from viber
AKK May 5, 2015 at 10:59 AM
Hello! Alert,Will you suck my dick?If so, give me yuor facebook account. Let we will meet in somewhere.
viber09797508802 at mdy need top
家苍何 May 15, 2015 at 8:47 AM
i bottom add viber09798144381 in muse
家苍何 June 11, 2015 at 6:00 PM
From Ygn contact viber 0973018558
Zin Kowin May 25, 2015 at 7:38 AM
Come viber I m from ygn n smart 0973018558
Naing Tun June 23, 2015 at 10:27 PM
家苍何 June 19, 2015 at 9:46 AM
gayပွဲစားရှိရင်add me viber09780068749
datha kyawaung June 24, 2015 at 12:10 AM
Home July 16, 2015 at 10:46 AM
ဖင်​လိုးချင်​တယ်​..အသက်​ ၂၀​ကျော်​ မနွဲ့ရ...မန်း​လေးက..ဆက်​သွယ်​ချင်​ရင်​ moehtetlinnsat@gmail.com...ကြိုက်​ရင်​ ဖုန်းနံပတ်​​ပေးမယ်​ viber က​နေချိတ်​ပါ..​နေရာမရှိဘူး
Bo Bo July 29, 2015 at 4:25 PM
Lucky boy December 30, 2017 at 2:08 AM
Ygn က bot ပါ။ T တစ်ယောက်နဲ့တွေ့ချင်ပါတယ်။နေရာလဲရှိပါတယ်။ပိုက်ဆံလိုချင်ရင်လဲပေးပါမယ်။
Mg Taza August 15, 2015 at 9:40 PM
မိုးညှင်း က Bot ရှိလား
datha kyawaung August 28, 2015 at 6:16 AM
viber 797871968 ကိုaddပါ
Bo Bo September 20, 2015 at 12:40 AM
အသက်က 28 နှစ် role က Bot ပါဘော်ဒီတောင့်ပြီး ရုပ်ရည်အသင့်အတင့်ရှိတဲ့သူနဲ့ Sex ဖြစ်ချင်ပါတယ်။ 0931050230 ကို Viver ကနေပုံပို့ပေးပါ။09260023739 ကိုလည်း meaasage ပို့ပါ။ Offer ဆိုရင်လဲ ဈေးသင့်ရင်ခေါ်ချင်ပါတယ်။
Anonymous December 11, 2015 at 9:25 AM
minye htet April 23, 2017 at 12:12 AM
Top Koko May 10, 2017 at 9:06 PM
Top Koko May 10, 2017 at 9:07 PM
Top Koko May 10, 2017 at 9:08 PM